Kuenderera mberi Filtration System, Kuenderera mberi Filter Disc, Catalyst Thickener- Zhengyuan
Zhenyuan anokodzera ISO9001: 2008 Quality Management System, iyo ISO14001: 2015 Environmental Eanagement System, uye iyo OHSAS18001: 2007 Occupational Health uye kuchengetedza Yekutevera Ongororo. Zhengyuan inhengo yedare re "National technical Committee yeCustomer Characterization uye Screening Standardization" (SAC / TC168) uye "National technical Committee yeStrZardisation yeSetificial Machinery" (SAC / TC92). Chayo chiratidzo, "ZYstar", yave nemukurumbira
Iyo Yakasarudzika Inokodzera High-Tech Enterprise.
Zhengyuan yakatsaurira musangano wekuchenesa uye makamuri ekushandira aine michina yepamusoro uye nzira dzekuona, idzo dzinokwanisa kuitisa kuyerwa kwacho ..
Iyo simbi fiber yekutadza inonzwa inogona kupik ...
Iyo sintered mat yakagadzirwa ne micron diangle nonwovens, simbi uye yakakwirira kupisa sintered simbi nyuzi. Iyo yakawanda-dhaidhi simbi fiber mat inokwanisa kugadzira pore gradient kubva kune dzakasiyana pore layer, uye inokwanisa kudzora kusefera kunyatso uye kamwe-damba mat kusvibiswa. Iyo inogona kuchengetedza maitiro ekutsvaira kweaya jira rekuenderera mberi, uye iine hunhu hwematatu-emhando network, porous chimiro, yakakwirira porosity, yakakura surfac ...
Multilayer sintered simbi mesh chinhu chitsva ...
Multilayer sint s mesered mesh rudzi rutsva rwemafirita ezvinhu zvine simba rakawanda uye yakazara kuomarara. Iyo yakagadzirwa ne multilayer simbi yakarukwa mesh uye inogadziriswa neyemahara lamination yekutsikirira uye vacuum sinching. Iyo mesh yakadzorwa kuti iite yunifomu uye yakakodzera dhizaini dhizaini. Izvo hazvisangokurire chete kutadza kwesimba rakaderera, kusagadzikana kuomarara uye kusagadzikana mesh chimiro cheiyo yakajairika mesh mesh, asi zvakare inogona zvine musoro kuenzanisa uye ...